> Resource> iPod> Mmiri mebiri emebi iPod aka! Olee otú Naghachi Data sitere na ya
iPod aka 4G mmiri mebiri emebi! Enyemaka!
Ụnyaahụ m ama esịn m iPod aka 4G na saa. M tụgharịrị ya na, ọ bịara na ma mgbe ahụ, ọ dị nnọọ n'ụzọ ụfọdụ fizzled si na m nwere ike adịghị enweta ya azụ ọzọ. M na-enweghị echiche ma ọ bụrụ na ọ bụ ihuenyo, n'ụlọ isi, wdg; ihu ọma ihe m na-arịọ ya bụ, ka m nwere ike na-azụ m data na m iPod aka 4? M nwere mkpa foto na ndetu. Biko nyere!
Mgbe nile akwado gị iOS ngwaọrụ iTunes bụ n'ezie ezi àgwà n'ihi na ọ bụla iOS ọrụ, karịsịa mgbe i nwere mkpa data. Mgbe gị iPod aka 4 na-mmiri mebiri emebi, dịghị mkpa, ị ka nwere ohere maliteghachila data. Ihe kacha ụzọ bụ iji wepụ iTunes ndabere gị iPod aka. Gịnị ma ọ bụrụ na ị na-adịghị na otu iTunes ndabere? Na kwesịrị ekwesị software, ị nwekwara ike ozugbo iṅomi ma naghachi data site na ya.
Olee otú naghachi data site na mmiri mebiri emebi iPod aka
Ọ bụrụ na ị a Windows onye ọrụ, na-eji Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery maka Windows) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery): Ị nwere ike naghachi data kpọmkwem site mmiri mebiri emebi iPod aka (nani maka iPod aka 4), ​​ma ọ bụ site adịrị iTunes ndabere faịlụ (nile di iche iche nke iPod aka).
Ọzọ ka na-Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows) ihe atụ. Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, na-aga ebe a: iPod aka data mgbake.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ mmiri mebiri emebi iPod aka 4 na kọmputa
Jikọọ gị mmiri mebiri emebi iPod aka na kọmputa na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone maka iOS. Ị ga-esi na interface n'okpuru. A abụọ mgbake ụdịdị n'ihi na ị na weghachite data site na mmiri mebiri emebi iPod aka: naputa site na iOS Device (nani maka iPod aka 4), ​​na naputa site na iTunes ndabere File (n'ihi na iPod aka ụdị). Ọzọ ka ego otú naputa site na ngwaọrụ gị.
N'ihi na iPod aka 4, i kwesịrị download a plugin n'ihu gị ịga n'ihu. Mfe pịa Download bọtịnụ iji nweta ya.
N'ihi na iPod aka 5, ị na-adịghị mkpa, na usoro si window ga-adị ka n'okpuru.
Nzọụkwụ 2. iṅomi gị mmiri mebiri emebi iPod aka
Ụzọ nile nke ịgụ isiokwu gị iPod aka dị iche iche. N'ihi na iPod aka 5 ọrụ, gị na mkpa iji pịa Malite iṅomi button na isi window ịnọgide, mgbe maka iPod aka 4, i kwesịrị itinye ya ịgụ isiokwu mode mbụ. Soro nzọụkwụ n'okpuru inwe na (ma ọ bụ nzọụkwụ kọwara na usoro si window na ị nwetara):
Jide gị iPod aka, na pịa Malite bọtịnụ.
Pịa Ike na Home buttons n'otu oge mgbe ị pịa Malite maka kpọmkwem 10 sekọnd. Usoro ihe omume ga gụọ oge maka gị.
Hapụ Ike button mgbe 10 sekọnd gafere, ma ịnọgide na-ejide ndị Home bọtịnụ maka anther 10 sekọnd.
Hapụ Home button mgbe ị na-ozi ịga nke ọma.
Mgbe ahụ software amalite ịgụ isiokwu mmiri gị mebiri emebi iPod aka maka data, gụnyere furu efu data na ẹdude data.
Nzọụkwụ 3. Preview & ịzọpụta iPod aka data
Mgbe Doppler, ị nwere ike ihuchalu niile natara data tupu mgbake. Mark faịlụ na ị chọrọ iji naghachi na pịa Naghachi na-azọpụta ha niile na kọmputa gị na otu Pịa.
Cheta na: Data ịchọta ebe a na-agụnye ihe i nwere na gị iPad ugbu a na ndị ị na-ehichapụ n'ihu. Ị nwere ike Mia bọtịnụ na-acha uhie uhie ebe na interface n'elu naanị ngosi ehichapụ ihe.